February 13, 2020 - CeleLove
February 13, 2020 CeleLove 0
အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးငွေစုနည်း (၃) မျိုး ငွေကြေးပြဿနာတွေကို သင် ဘာလို့ရင်ဆိုင်နေရလဲ သိပါသလား။ လကုန်တာနဲ့ လက်ထဲမှာ ငွေဘာလို့ မကျန်တော့တာလဲဆိုတာကိုကော သင်သိပါသလား။ အောင်မြင်သူတွေမှာ အများနဲ့ လုံးဝမတူတဲ့ ငွေစုနည်းတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ စာချစ်သူတို့အတွက် အောင်မြင်သူတွေ လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ ငွေစုနည်း (၃) မျိုးကို […]
လုံးဝမစားသင့်သော ဝက်သားရဲ့ အစိတ်အပိုင်း (၅) ခု “အသီးမှာ သရက်၊ အသားမှာ ဝက်၊ အရွက်မှာ လက်ဖက်” ဆိုရိုးစကားအတိုင်း ဝက်သားဟာ လူးတွေ နေ့စဉ်စားသုံးကြတဲ့ အသားတွေထဲမှာ အရသာရှိတဲ့ ထိပ်တန်းအသားတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ် …။ ဒါပေမယ့် ဝက်သားရဲ့ အစိတ်အပိုင်း (၅) ခုကတော့ […]
အဆင်မပြေတဲ့အချစ်ရေးကို မိန်းကလေးအများစု လက်မလွှတ်နိုင်ကြတဲ့ အကြောင်းအရင်း(၄)ချက် မိန်းကလေးတွေဟာ တကယ်ချစ်သွားပြီဆိုရင် သူတို့ချစ်တဲ့သူက ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့သူဖြစ်ဖြစ် လွယ်လွယ်နဲ့လက်တွဲမဖြုတ်တတ်၊ ကျောမခိုင်းတတ်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲစေတဲ့အချစ်ရေးကို စိတ်ညစ်ခံပြီး ဖက်တွယ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးအများစု ဘာလို့များ ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့အချစ်ရေးကိုလက်မလွှတ်ဘဲ ရှေ့ဆက်နေတာလဲဆိုတော့ ဒီအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်နော် … (၁) အထီးကျန်မှာကြောက်လို့ မိန်းကလေးတိုင်းက အထီးကျန်မှာကြောက်လို့ အဆင်မပြေတဲ့အချစ်ရေးကို […]
ဆံပင်မကျွတ်တော့ပဲ ဆံပင်တွေသန်လာပြီး အကြောပြေစေတဲ့ ည အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း ဆားနင်းခြင်း နေ့စဉ်အချိန်မှန် ည အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း ဆားနင်းခြင်း ဆားနင်းရင် ကိုယ်တွင်းအောင်းပူတွေကို ထွက်စေနိုင်ပါတယ် …။ နင်းပုံနင်းနည်းကတော့ … မနင်းခင် ခြေထောက်ကို ပေါင်ရင်းကစပြီး ရေလောင်းဆေးပါ။ ခြောက်အောင်သုတ်ပါ …။ ဆား ၁ ပိဿာ […]
ရှားပါးစာရင်းဝင် ချစ်သူလက္ခဏာ (၅) မျိုး အချစ်စစ် ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း ရှားပါး လာတာနဲ့ အမျှ သင့်ကို စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ချစ်တဲ့သူ၊ ဘာအကျိုးကိုမှ မမျှော်ကိုးပဲချစ်တဲ့သူ၊ သစ္စာရှိရှိ ချစ်တဲ့သူဆိုတာ တကယ်ကို ရှားပါးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ခုဖော်ပြတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေတဲ့ ချစ်သူ […]
မင်းကို အဖက်မလုပ်တဲ့ လူကိုမှ နှလုံးသားထဲထည့်ထားရတာ မပင်ပန်းဘူးလား သူ့စိတ်ထဲမှာ မင်းကို ရှိတယ်လို့တောင် သတ်မှတ်မထားထားတဲ့ လူကိုမှ အတွေးထဲမှာ ထည့်ထားရတာ မပင်ပန်းဘူးလား …? အဖက်မလုပ်တဲ့ လူကိုမှ နှလုံးသားထဲထည့်ထားရတာ မွန်းကြပ်ပြီး ပူလောင်မနေဘူးလား …? မင်းကိုယ်မင်း သနားညှာတာ သင့်ပါပြီ …။ သူ့စိတ်နဲ့ […]
အဝတ်အစား အသစ်ဝယ်တိုင်း တန်းမဝတ်ပဲ လူတိုင်း သတိထားရမယ့် အရာများ
အဝတ်အစား အသစ်ဝယ်တိုင်း တန်းမဝတ်ပဲ လူတိုင်း သတိထားရမယ့် အရာများ လူတစ်ယောက်အတွက် အဝတ်အစားဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ လိုအပ်မှုကြောင့်ရော၊ ဖက်ရှင်အတွက်ရော လူတွေက အဝတ်အစားကို ဝယ်ယူ ဝတ်ဆင်ကြရပါတယ်။ အဝတ်အစားကို ဝယ်တဲ့အခါ အဝတ်အစားအသစ်တွေကို သင်က တန်းဝတ်တတ်တဲ့သူဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို သတိထားသင့်ပါတယ်နော် … #အရင်ဆုံး လျှော်လိုက်ဖို့ […]
ချစ်သူကို ရင်တုန်သွားစေမည့် အနမ်း (၁၀) မျိုး
ချစ်သူကို ရင်တုန်သွားစေမည့် အနမ်း (၁၀) မျိုး အောက်ပါ အနမ်း (၁၀) မျိုးထဲက ကျနော့် ချစ်သူကို မေးကြည့်ပါတယ်။ ဘယ်ဟာ ပိုကြိုက်သလဲ လို့။ သူကတော့ တစ်မျိုးစီ ကြိုက်တာချည်းပါပဲ တဲ့ …။ ဒါကြောင့် လူမျိုး မရွေး၊ ဘာသာ မရွေး၊ […]
တစ်လအတွင်း ဆံပင်အုံထူပြီး အရှည်မြန်လာစေဖို့ အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း
တစ်လအတွင်း ဆံပင်အုံထူပြီး အရှည်မြန်လာစေဖို့ အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း မိန်းကလေးဆိုတာက ဆံပင်ညှပ်ချင်တုန်းကလည်း ညှပ်ချင်လွန်းလို့ ညှပ်ပြီးသွားပြန်ရင်လည်း ငါ့ဆံပင်လေး ဘယ်တော့များမှ ရှည်လာပါ့မလဲ၊ အရင်ကဆံပင်လေး ပြန်လိုချင်လိုက်တာ စသဖြင့်ပေါ့နော်။ ဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေရော၊ ဆံပင်ပါးလို့ စိတ်ညစ်နေသူလေးတွေကိုပါ နည်းလမ်းကောင်းလေး ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်လအတွင်းမှာ သင့်ရဲ့ဆံပင်အုံကို ထူထည်းပြီး အရှည်မြန်လာစေမှာပဲ […]
ပိုက်ဆံမက်ပြီး အသက် (၆၀)ကျော်ကို ယူလိုက်တဲ့ အသက် (၂၀)အရွယ် မိန်းမပျိုလေးရဲ့ အဖြစ်ဆိုး…
ပိုက်ဆံမက်ပြီး အသက် (၆၀)ကျော်ကို ယူလိုက်တဲ့ အသက် (၂၀)အရွယ် မိန်းမပျိုလေးရဲ့ အဖြစ်ဆိုး… ပိုက်ဆံမက်တဲ့ အသက် ၂၀အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ အသက် ၆၀ ကျော်သူဌေးကြီးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပါတယ် …။ တစ်ပါတ်လောက်နေတော့ ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းက အခြေအနေသိချင်လို့ ဖုန်းဆက်ပြီး စပ်စုကြည့်တယ် …။ “သူငယ်ချင်း အခြေအနေ ဘယ်လိုနေလဲ? […]